Doogee Y6 Max 3D, fahatsapana voalohany | Androidsis
Doogee dia niaraka tamin'ny vaovaony nandritra ny MWC ary tsy nanadino ny fotoana hitsapana ny vahaolana izahay amin'ny foibe telephony lehibe indrindra. Ary ny iray amin'ireo izay nahagaga anay indrindra dia ny Doogee Y6 Max 3D, fitaovana iray tsy mitovy amin'ny hafa.
Ary io finday mahaliana io dia miavaka amin'ny efijery mamela anao hijery atiny amin'ny lafiny telo. Tadidinao ve ny LG Optimus 3G? TSARA Doogee miloka amin'ny telefaona tena mitovy, na dia misy aza ny teknolojia nohatsaraina.
2 Toetra mampiavaka ny Doogee Y6 Max 3D
2.1 DOOGEE Y6 Max 3D Gallery
Miaraka amin'ny efijery 6.5-inch, ny Doogee Y6 Max 3D dia terminal lehibe sy lehibe. Miaraka amin'ny refin'ny 173 x 89 x 9 mm ary lanja 253 grama, be ny telefaona.
Asongadino fa manana vatana izy vita amin'ny polycarbonate na dia vita amin'ny aliminioma aza ny endriny, manome touch premium ho an'ny Doogee Y6 Max 3D. Mitovy amin'ny bokotra heriny sy ny fanaraha-maso ny feony, miorina amin'ny ilany ankavanan'ny telefaona ary, vita amin'ny vy, dia manolotra fikasihana tsara sy fivezivezena rehefa tsindriana.
Mahatsiaro ho tsara eo am-pelatanana ny telefaona, na dia eo aza ny haben'ny habeny tsy azo ampiasaina raha tsy tanana roa. Soa ihany fa misy safidy izay mampihena be ny haben'ny atiny hitantsika eo amin'ny efijery mba hahafahantsika mampiasa ny Doogee Y6 Max 3D amin'ny tanana iray, manamora ny fidirana amin'ny zoro rehetra.
Un phablet feno izay manana endri-javatra mihoatra ny ampy hamindrana izay lalao na fampiharana tsy misy olana, nampiana amin'ny efijery mahaliana azy, nahatonga ity finday ity ho fitaovana tokana.
Toetra mampiavaka ny Doogee Y6 Max 3D
Hanomboka aho amin'ny firesahana ny efijery an'ny Doogee Y6 Max 3D, noforonin'i a Tontonana IPS 6.5 inch Manolotra vahaolana feno HD (1920 x 1080 teboka) sy hakitroka 339 teboka isaky ny santimetatra. Izy io koa dia manana teknolojia mamela anao hijery atiny amin'ny lafiny telo tsy mampiasa solomaso, noho ny haitao tena mitovy amin'ny nampiasan'ny Nintendo 3DS.
Manohy ny sisa amin'ny famaritana ny Doogee Y6 Max 3D, manana processeur izy MediaTek MTK6750 Ny hafainganam-pandehan'ny famantaranandro valo haingam-pandeha miaraka amin'ny hafainganan'ny famantaranandro 1.5 GHz, miampy a Mali T860 GPU sy RAM 3 GB.
Na dia manana aza ny Doogee Y6 Max 3D Fitaovana anatiny 32 GB, azontsika atao ny manitatra ny fahatsiarovana amin'ny alàlan'ny slot micro SD card izay mampiditra an'ity telefaona 3D mahaliana ity. Mitohy amin'ny fakantsary lehibe indrindra, 13 megapixels misy f / 2.2 aperture ary flash LED roa. Raha ny momba ny fakantsary eo aloha dia mijanona amin'ny 5 megapixels izy io.
Mariho fa ity telefaona ity dia manana sensor ho an'ny rantsantanana hita ao ambadiky ny fitaovana. Ny iray amin'ireo teboka manan-danja indrindra amin'ny phablet dia ny fizakan-tenany ary ny Doogee Y6 Max 3D dia manana bateria 4.300 mAh, mihoatra ny ampy hanohanana ny lanjan'ny finday rehetra.
Telefaona tena liana te hahagaga ahy tamin'ny famerenako karazana teknolojia izay vitsy ny mpanamboatra miloka. Hamoaka tsy ho ela ny famerenana ny Doogee Y6 Max 3D izahay izay hamakafaka tsara ny antsipiriany rehetra momba ity fitaovana ity.
Farany, avelako miaraka amin'ny galerin'ny sarin'ny phaglet Doogee vaovao miaraka amin'ny haitao hilalao horonantsary 3D ianao nefa tsy mampiasa solomaso.
DOOGEE Y6 Max 3D Gallery
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » MWC » Doogee Y6 Max 3D, fahatsapana voalohany